Myanmar online x video | USA
Myanmar online x video Sex chatt with camstar
Posted by / 31-Dec-2019 15:35
MNTV is one of the popular free-to-air TV channel in Myanmar.MNTV analog network (NTSC) stretched out to an estimated reach of (25.3) million viewers in the most major cities in Myanmar including Capital City Nay Pyi Taw and the other main cities MITV : MITV isacelebration of all aspects of Myanmar culture from the ancient to the brand new, in english language. MITV isabroadcast TV brand intended for international and local English speaking consumers, launched on 31st March 2010 based in Yangon.ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ 90% လောက်က သတ်နေဖြတ်နေတာပါ...တိုက်ပွဲထဲမှာ ခေါင်းမှီရင် ခေါင်းကိုခုတ် လက်မှီရင် လက်ကိုခုတ် ...
Regular programming by Bama Athan began in February 1946 when the British established Burma Broadcasting Service (BBS), carrying Burmese language national and foreign news and musical entertainment, knowledge reply and school lessons and English language news and music programming.
Channel7: In 2012, Forever Group Co., Ltd launched the second free-to-air channel called Channel 7, targeting to the younger audience of Myanmar.
ဒီကားကတော့ မင်းသားကြီးben kingsleyရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ဆီးရီးယားမှာဓါတုဓါတ်ငွေ့တွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဘ်ာဂျီယံရဲ့လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးနဲ့အတူ ဓါတ်ငွေ့သေနတ်ကိုရှာပုံတော်ဖွင့်ကြပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုဆီးရီးယားဘက်က ပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့အခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကိုလည်းလိုက်ရှာရင်း တစ်ဖက်မှာလည်းခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာပေးရပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီလိုလိုက်ရှာရင်းဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံမိတဲ့အခါမှာ ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ကနေအမြဲလိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူက သူ့တစ်ချိန်ကအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းရဲ့သားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ နောက်ဆုံးမှာဒါတွေအားလုံးကိုချုပ်ကိုင်ထားတဲ့သူကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါဦးနော် Unicode ================== ဒီကားကတော့ မငျးသားကွီးben kingsleyရဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားပဲဖွဈပါတယျ ဆီးရီးယားမှာဓါတုဓါတျငှတှေ့နေဲ့စဈပှဲဖွဈနတေဲ့အခြိနျ ဘျာဂြီယံရဲ့လြှို့ဝှကျစဈဆငျရေးနဲ့အတူ ဓါတျငှသေ့နေတျကိုရှာပုံတျောဖှငျ့ကွပါတယျ အဲဒီအခြိနျမှာပဲသူ့ရဲ့ခေါငျးဆောငျဗိုလျခြုပျကိုဆီးရီးယားဘကျက ပွနျပေးဆှဲသှားတဲ့အခါမှာ ဗိုလျခြုပျကိုလညျးလိုကျရှာရငျး တဈဖကျမှာလညျးခိုငျးတဲ့ပစ်စညျးကိုရှာပေးရပါတယျ ဒါပမေယျ့လညျး အဲဒီလိုလိုကျရှာရငျးဗိုလျခြုပျပွောခဲ့ဖူးတဲ့ မိနျးမတဈယောကျနဲ့တှဆေုံ့မိတဲ့အခါမှာ ပွီးတော့သူ့ကိုနောကျကနအေမွဲလိုကျပွီးစောငျ့ကွညျ့နတေဲ့သူက သူ့တဈခြိနျကအခဈြဆုံးသူငယျခငျြးရဲ့သားဖွဈနတေဲ့အခါမှာ နောကျဆုံးမှာဒါတှအေားလုံးကိုခြုပျကိုငျထားတဲ့သူကိုသိလိုကျရတဲ့အခြိနျ ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကွညျ့လိုကျပါဦးနျော File Size : (1 GB , 391 MB) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 1 hr 53 min Format : Mp4 Genre : Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phue Encoded by Moe Myint Lwin ဒါကတော့ လက်တလောထွက်ရှိလာတဲ့ Horror comedy movieပဲဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်အေမှာနေထိုင်တဲ့အိုလီတစ်ယောက် အလုပ်ကလည်းပြုတ်ပြီး စွဲလမ်းဖွယ်မကောင်းတဲ့ရည်းစားနဲ့လည်း လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာတော့ စိတ်‌ပြေလက်ပျောက်အနားယူဖို့အတွက် မစည်ကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကအိမ်တစ်အိမ်ကို လိုင်းပေါ်မှာရှာပြီး အဲ့အိမ်မှာသူတစ်ယောက်တည်း ရက်အနည်းငယ်‌လောက်သွားနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်တော့အဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် တစ်ခါမှလူမသတ်ဖူးလို့ လူသတ်ကြည့်ချင်နေတဲ့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်အိမ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကားမှာအိုလီတစ်ယောက်အဲ့အိမ်မှာသွားနေရင်း ‌အဖိုးကြီးရဲ့အကြံအစည်တွေနဲ့ခြောက်လှန့်ခံရပုံတွေ၊ အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားရပုံတွေ (horrorဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းအိုလီကမျက်မှန်မပါရင်မမြင်ဘူးလေ 😁)နှင့် အရေးအကြောင်းဆိုအခွီတွေလုပ်နေပုံတွေကိုကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်။ Unicode ======================= ဒါကတော့ လကျတလောထှကျရှိလာတဲ့ Horror comedy movieပဲဖွဈပါတယျ။ အယျလျအမှောနထေိုငျတဲ့အိုလီတဈယောကျ အလုပျကလညျးပွုတျပွီး စှဲလမျးဖှယျမကောငျးတဲ့ရညျးစားနဲ့လညျး လမျးခှဲပွီးနောကျမှာတော့ စိတျ‌ပွလေကျပြောကျအနားယူဖို့အတှကျ မစညျကားတဲ့မွို့တဈမွို့ကအိမျတဈအိမျကို လိုငျးပျေါမှာရှာပွီး အဲ့အိမျမှာသူတဈယောကျတညျး ရကျအနညျးငယျ‌လောကျသှားနဖေို့ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖွဈခငျြတော့အဲ့အိမျပိုငျရှငျကရူးကွောငျကွောငျဖွဈနတေဲ့အပွငျ တဈခါမှလူမသတျဖူးလို့ လူသတျကွညျ့ခငျြနတေဲ့ အဖိုးကွီးတဈယောကျအိမျဖွဈနပေါတယျ။ ဒီကားမှာအိုလီတဈယောကျအဲ့အိမျမှာသှားနရေငျး ‌အဖိုးကွီးရဲ့အကွံအစညျတှနေဲ့ခွောကျလှနျ့ခံရပုံတှေ၊ အသကျရှငျဖို့ကွိုးစားရပုံတှေ (horrorဆိုတော့ ထုံးစံအတိုငျးအိုလီကမကျြမှနျမပါရငျမမွငျဘူးလေ )နှငျ့ အရေးအကွောငျးဆိုအခှီတှလေုပျနပေုံတှကေိုကွညျ့ရှုမှာဖွဈပါတယျ။ File Size : (820 MB , 303 MB) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 1 hr 44 min Format : Mp4 Genre : Comedy , Horror , ...
At the same time We can discuss these logics in light of the3dimensions of signification, domination, and legitimation. We can talk about the dimension of records and archives as the data, the sources of information, knowledge and culture for the community.